\_ articles Islaamka \_ guud \_ Qaamuus soomaali carabi oo kooban
Haddii aad xiiseyneysid qaamuuskan oo aad dooneyid inaad ogaato sidii lagu heli lahaa, iyo haddii aad ku aragtid khaladaad xagga tarjamada ah, Eebbe kaliya ayaa dhamaystirane ha kaa abaalmariyo. Waxaad fadlan kala soo xiriiri kartaa cinwaanka qoraaga qaamuuskan bariidka xaasuubkiisa "e-mailkiisa" oo ah: ”ina_warfaa@hotmail.com”.
Waxa aan ugu horrayntii u mahadnaqayaa Eebbe, oo igu galadaystay nimcooyin tira badan oo aanan koobi karin. Ka dibna waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadkii igu caawiyey talo, fikrad, dhiiragalin iyo sida habka wax loogu qoro xaasuubka "kombiyuutarka" gaar ahaan Bile. Waxaan idin leeyahay جزاكم الله خيرا .